Posted by ကို Tranquillus | သြဂုတ်လ 8, 2018 | ရေးသားပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
Professional ကပေါင်းစပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်လုပ်ရပ်များအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ရိုးရှင်းသော key ကိုစိတ်ကူးများကို select နှင့်မျိုးပွားရန်ဖြစ်ပါသည်ကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကျဉ်းချုပ်ရေးသား အရေးမဟုတ်ပါဘူး, အထူးသဖြင့်အဖြစ် ပေါင်းစပ်၏ဝိညာဉ် အလွန်ဘုံမှာသဘာဝစိတ်နေသဘောထားမဟုတ်ပါဘူး။ ကကြိုတင်အစီအစဉ်မတူညီသောအတွေးအခေါ်များကိုက်ညီသောသေတ္တာများဖန်တီးအတိုင်းလိုက်နာမှကြွလာသောအခါပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပေါင်းစပ်၏စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကိုထပ်မံရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်စုတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်အစီရင်ခံစာယူပြီးဖြစ်စေ, အတော်ကြာစံအဆိုပါသတ်မှတ် တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကျဉ်းချုပ်ရေးသား အောင်မြင်သော။ သင်ကြား တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကျဉ်းချုပ်ရေးသားဖို့ကိုဘယ်လိုဤတွင်အချို့သောအကြံပေးချက်များနှင့်အကြံဉာဏ်ကိုဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကျဉ်းချုပ်ကျောင်းသားများအတွက်တစ်ဦးစာစီစာကုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်တိကျတဲ့ဘာသာရပ်န်းကျင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူအစီအစဉ်တစ်ခုနှင့်အတူရေးသားခြင်းလိုအပ်ပါတယ်ပေမယ့်, တကပုဂ္ဂိုလ်ရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါဤအရပ်၌မရှိ။ တစ်နည်းမှာပေါင်းစပ်သင့်ရဲ့သတိမှထွက်ခွာသွားသည်မဟုတ်။
ဤသည်ဖိုင်တစ်ဖိုင်သို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်း၏တူညီသောလေ့လာမှုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဒီမဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်ဆံဖို့ကုသရန်သို့မဟုတ်မမှအရေးမပါဘူး။ အဆုံးစွန်သောက၎င်း၏တခုလုံးကိုကုသရပါမည်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ရေးသားသူအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခံစားမရသင့်ပါတယ်။ အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်ကို process မှဖိုင်ကိုထည့်သွင်းမဖြစ်သင့်နှင့်ဘာသာရပ်တားမြစ်သည်။
အဆိုပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကျဉ်းချုပ်တောင်မှလျော့နည်းကာအုပ်ချုပ်ရေးမှတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံးအရေးအသားကိုသူတို့အပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများတစ်ဘုံအမှတ်ရှိပါကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပေါင်းစပ်ယင်း၏အကြွင်းမဲ့အာဏာဓမ္မဓိဋ္ဌာန်အားဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။ ယင်း၏ယေဘုယျယဉ်ကျေးမှုမှတဆင့်န်ထမ်းပေါင်းစပ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အထွေထွေအခြေအနေတွင်အတွက်ဘာသာရပ်ထားရပေမည်။
Une ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်တစ်ဦးရည်ရွယ်ချက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ပြောင်းလဲနေသောလမ်းအတွက်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပုံဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်, စည်းမျဉ်း, စံ, တစ်ဦးပြည့်စုံဖိုင်စာအုပ်တစ်အုပ်အဖြစ်စာရွက်စာတမ်းရိုးရှင်းစွာ။
ဤသည်အတွေးအခေါ်များရေတွင်းတစ်တွင်းထူထောင်ဆင်ခြင်ခြင်းသည်နှင့်အညီနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ဘယ်မှာတသမတ်တည်းနှင့်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းမှုဖွဲ့စည်းဒြပ်စင်အစုတခုဖြစ်ပါတယ်။ Professional ကပေါင်းစပ်သည့်ပိုကနေမတူ, အဲဒါကိုဖွံ့ဖြိုးသည့်အတွေးအခေါ်များအပေါ်အမှတ်တံဆိပ်ဘက်လိုက်မှုသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းမရှိဘဲကြားနေနှင့်ရည်ရွယ်ချက် enunciation နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစကိုဝေဖို့ဒါမှမဟုတ် extrapolate ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းမရှိဘဲစာရေးဆရာများအတွေးအခေါ်များမှစစ်မှန်တဲ့နေဆဲဖြစ်သည်။
ဒါဟာရန်အရေးကြီးပါသည် တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကျဉ်းချုပ်ရေး လက်ခံသူတစ်ဦးဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်ထိရောက်စွာအရေးယူခွင့်ပြုပါရန်။ ရရှိနိုင်ပါအချက်အလက်များ၏ပမာဏကိုကြီးမားသည်နှင့်များစွာသောဒေသများတွင်အမြဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အချိန်သို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအဖုံးကို။ ထို့ကြောင့်ရှင်းလင်းမှတ်စုရေးရန်နှင့်ဖြန့်ဖြူးရန်လိုအပ်ကြောင်း။
သငျသညျသတင်းအချက်အလက်ရေးသားခြင်းနှင့်စုဆောင်းစတင်ခင်မှာ, သင်ပထမဦးဆုံးတဲ့ professional ပေါင်းစပ်၏ရည်ရွယ်ချက်သတ်မှတ်ရပေမည်။ ပေါင်းစပ်ဖို့ရည်မှန်းချက် Set အဘယ်အရာနှင့်ကအစေခံပါလိမ့်မယ်အဘယ်သူကိုမှရှငျး။ ပြိုင်ပွဲတစ်အကျဉ်းချုပ်မတူဘဲ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပေါင်းစပ်၏မှတ်စုတစ်ခုလုပ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အထူးအာရုံစိုက်နေစဉ်မျှမျှတတအခမဲ့အမျိုးအစား၌ပြစ်မှားမိသည်။
ဖတ်ရန် Method ကို Orthodidacte အတူသာလျှင်တစ်ခုမှာစာလုံးပေါင်းအမှားတွင်ပိုမို Make သလား
ငါတို့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပေါင်းစပ်ဘို့ရေးထားနားလည်ရပေမည်။ အဆိုပါပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသည့်ဘာသာစကားထို့ကြောင့်၎င်း၏အများပြည်သူအညီ adapter ဖြစ်ပါတယ်။ စာရွက်စာတမ်းကွန်ပျူတာနည်းပညာရှင်များအတွက်ရည်ရွယ်လျှင်ထို့ကြောင့်, တကနည်းပညာဆိုင်ရာဝေါဟာရသုံးစွဲဖို့ပုံမှန်ဖြစ်လိမ့်မည်စာရွက်စာတမ်းရှေ့နေ, ဒါမှမဟုတ်စာရင်းကိုင်မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလျှင်, cons အသုံးပြုပုံထိုကဲ့သို့သောဘာသာစကားရှောင်ရှားပါလိမ့်မည်။
ဒီအဆင့်မှာမိမိတင်ပါတယ်၏ဘာသာရပ်၏အသိပညာ၏အဆင့်ကိုသိရန်လည်းအရေးကြီးပါသည်။ က neophyte ဖြစ်ပါတယ်လျှင်, ပေါင်းစပ်ဘာသာရပ်ခြုံငုံသုံးသပ်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အခြားသူတစ်ဦး၏စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးရှုထောင့်ကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမျှမ neophyte ဖြစ်ပါတယ်။
ပေါင်းစပ်တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားအဘယျသို့ရည်ရွယ်ချက်သိမှတ်ကြလော့လည်းအလွန်အရေးပါသည်။ ပေါင်းစပ်စသည်တို့ကို, တစ်ဦးခေါင်းစဉ်တခုတခုအပေါ်မှာအမြင်ဖွဲ့စည်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုပ်, ပြဿနာတစ်ခုမှအဖြေတစ်ခုရှာ, သတင်းအချက်အလက်အတည်ပြုအစီရင်ခံစာပိုမိုနက်ရှိုင်းဖို့ရန်အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေဤသည်ခြေလှမ်း ဘာသာရပ်ဖို့ချဉ်းကပ်မှုသတင်းအချက်အလက်များအတွက်ရှာဖွေရေးသကဲ့သို့, ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။
စာများအတွက်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းစာဖတ်ခြင်းအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဘယ်အချိန်မှာကစာသား (ခေါင်းစဉ်, စာတန်းထိုး, စာရေးသူ၏ရည်ရွယ်ချက်, etc) ၏ဖွဲ့စည်းပုံ၏သုတေသနမှတဆင့်များနှင့်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကျော်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်း, စာသား synthesize ထံသို့မရောက်ရ။ သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းသတင်းအချက်အလက်များနှင့်မည်သို့သူတို့ဖွဲ့စည်းကြသည်များမှာဘယ်မှာသိရှိနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီရဲ့ contents နားလည်သို့မဟုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဤအဆင့်စဉ်အတွင်းကသာအခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်ပိုကြောင်းအားလုံးဖယ်ရှားပစ်ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသ, သတင်းအချက်အလက်အဘို့အရှာဖွေရေးပစ်မှတ်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့် defining ပြီးနောက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာဘယ်အရာကို (set ကိုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်) အတွက်သင်ကအဘယ်သူသည်အခါဘာကိုဘယ်လို, ဘယ်လောက်, အဘယ်ကြောင့် (ထိုအကြောင်းတရားများသတ်မှတ်ပေးရန်) မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရပါမည်သည့်တော်တော်များများအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပါတီများသုတေသနအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာသကဲ့သို့အဖြစ်ကြွယ်ဝပြည့်စုံနေကြသည်။
ဒါဟာတာရှည်စာကြောင်းများမသုံးရန်ဒီနေရာကိုအရေးကွီး၏, ဒါပေမယ့်ဂရုတစိုက်ထားတဲ့စိတ်ကူးများ၏ပေါင်းစပ်လွယ်ကူချောမွေ့ရန်သော့ချက်စာလုံးများကိုရွေးချယ်ပါရန်။ သတင်းအချက်အလက်အဘို့အရှာဖွေရေး၏အဆုံးမှာထွက်အရေးကြီးသောသော့ချက်စာလုံးများမှအထူးသတိထားရမှာတစ်ခုစီကိုပါတီအတွင်းဦးစားပေးစဉ်းစားပါ။ သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်စားပေးမယ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တိတိကျကျအစီအစဉ်ကိုတည်ဆောက်ကူညီရန်တစ်ခုမရှိမဖြစ်ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖတ်ရန် ပေးစာပုံစံ - သင်၏အသုံးမပြုတဲ့ခွင့်အတွက်ခွင့်တောင်းခံမှု
တစ်ဘို့အစီအစဉ်ကိုတည်ဆောက်ရန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကျဉ်းချုပ်ထိုသို့အရေးအပါဆုံးရှုထောင့်, အထူးအာရုံစိုက်မှုကိုခံထိုက်တဲ့သူတွေကိုမီးမောင်းထိုးပြရပေမည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကို (ထိုဘာသာရပ်ခြုံငုံသုံးသပ်နှင့်အတူ) တစ်ဦးအကြောင်းအရာအလိုက်ပေါင်းစပ်တစ်ဦးပေါင်းစပ်အဆိုပြုချက်များပေါင်းစပ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်တစ်ခုသို့မဟုတ်အကျိုးဆက်များ-ရှိမရှိအပေါ်မူတည်လွတ်လပ်စွာတည်ဆောက်ထားသည်။
စုဆောင်းအားလုံးအိုင်ဒီယာကတော့အကြမ်းဖျင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အရေးအပါဆုံးအတွေးအခေါ်များချိတ်ဆက်မည့်အစီအစဉ်သို့ fit သငျ့သညျ။ အဆိုပါအစီအစဉ်ပေါင်းစပ်၏ဘာသာရပ်နှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ပြီးဟန်ချက်ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ရပါမည်။ အဆိုပါအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ခွဲစိတျအပိုငျးတခုသိသိသာသာတန်းတူအရွယ်အစားရှိသည်နှင့်အကျိုးစီးပွားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ညီမျှဖြစ်ရမည်။
အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးအစီအစဉ်ကိုရှုပ်ထွေးမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းယုတ္တိနဲ့အလွယ်တကူနားလည်နိုင်။ ပထမဦးဆုံးအစိတျအပိုငျးအကြောင်းရင်းများနှင့်တစ်ဦးပြဿနာသက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏ဆန်းစစ်ဘို့သိုထားနိုင်ပါသည်။ ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကျနော်တို့ဒီပြဿနာများ၏အကျိုးဆက်များကိုတင်ပြနိုင်ပါသည်, ဖြစ်နိုင်သမျှဖြေရှင်းနည်းများနှင့်၎င်းတို့၏အကောင်အထည်ဖော်မှုများအတွက်အခြေအနေများတင်ပြသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပေါင်းစပ်၏မှတ်စုတစ်ခုရေးရန် များသောအားဖြင့်နှစ်ဦးသို့မဟုတ်သုံးပိုင်း၌ပြစ်မှားမိပေမယ့်အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုမှကန့်သတ်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းကိုအလွယ်တကူအားလုံး၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်အောင်ဒီအစီအစဉ်ကိုစာရွက်စာတမ်းအပေါ်ရှင်းလင်းစွာတင်ပြရပါမည်။ သငျသညျစိတျအပိုငျး (ငါနှင့် II ကို) နှင့်ပုဒ်မခွဲ (A နှင့် B သို့မဟုတ် 1 နှင့် 2) အတွက်အရအေတှကျအားဖွငျ့ရုပ်လုံးပေါ်လာသငျ့သညျ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအပိုင်းများနှင့်ပုဒ်မခွဲခေါင်းစဉ်အားဖြင့်ရှေ့ပြေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုအပြင်, သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပေါင်းစပ်လည်းတစ်ဦးမိတ်ဆက်ပြီးနိဂုံးချုပ်နိုင်ပါသည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပုံမှန်အားဖြင့်ဘာသာရပ်ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားပေမယ့်နိဒါန်းနှင့်နိဂုံးခြုပျလုနီးပါးအမြဲအတူတူအခန်းကဏ္ဍစောင့်ရှောက်လော့။ ထို့ကြောင့်နိဒါန်းအကြောင်းပြချက်အဆုံးစွန်၏အရေးပါမှုနှင့်တန်ဖိုးလှုံ့ဆော်လျက်, ပေါင်းစပ်၏အရာဝတ္ထု ပတ်သက်. လက်ခံရရှိသူအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ နိဒါန်း, တိကျမှုအကျဉ်းနှင့်ပြည့်စုံနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ရပါမည်။ အနည်းငယ်လိုင်းများအမှုဆောင်အကျဉ်းချုပ်တှငျဆှေးနှေးဘာပြောလောက်။
အချို့ကိစ္စများတွင် တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကျဉ်းချုပ်ရေးတစ်ဦးမိတ်ဆက်မလိုအပ်ပါဘူးကြောင့်သိသာသောအရာတို့ကိုမှတ်မိဖို့လေ့ကတည်းကသင်ကပေါ်ခြင်းမရှိဘဲလုပျဆောငျနိုငျပါသညျ။ သို့သော်ထိုသို့ addressee သင်နားလည်ကြောင်းသေချာစေရန်အထူးသဖြင့်အကြီးအအားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအကျဉ်းချုပ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖတ်ရှုဖို့ဖြစ်ပါတယ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအစ, ဆက်စပ်မှတ်မိဖို့ကူညီပေးသည်။
နိဂုံးနှင့်စပ်လျဉ်းသောကြောင့်စာရွက်စာတမ်းအနှစ်ချုပ်ထက်ပိုမိုလုပျဆောငျရမညျကပေါင်းစပ်တွင်ဖော်ပြထားသောပြဿနာတစ်ခုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်စာရေးဆရာနဲ့မဟုတ်ဘဲအစီအစဉ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ဒြပ်စင်အသစ်ရောက်စေဖို့အခန်းကဏ္ဍအားဖြင့်ထောက်ခံသည့်ဖြေရှင်းချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြမှကျယ်ပြန့်အကြံပြုချက်များအတွက်ကြာပါသည်။
ဆောက်လုပ်မြေပုံပြီးတာနဲ့မှဆက်လက်ဆောင်ရွက် တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကျဉ်းချုပ်ရေးသား။ အရေးအသားစာရွက်စာတမ်းများများအတွက်ယေဘုယျစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်းပေါင်းစပ်၏မူကြမ်းရေးဆွဲသက်ဆိုင်ပါသည်။ စာကြောင်းကောင်းစွာဖွဲ့စည်းပုံမှာအပိုဒ်နှင့်နားလည်ဝေါဟာရများတွင်တိုတောင်းသောဖြစ်သင့်သည်။ အမှုဆောင်အကျဉ်းချုပ်၏စတိုင်လ်များနှင့် syntax, အရေးအသား၏ codes တွေကိုနှင့်အညီဖြစ်ဖြစ်နိုင်လျှင်, အရည်ရိုးရှင်းပြီးကြော့ဖြစ်သင့်သည်။
အချို့ပစ္စည်းများအများကြီးရှင်းပြချက်လိုအပ်ပါကဖတ်ရှုခြင်းကပိုအရည်စာရွက်စာတမ်းစေရန်ပူးတွဲပါအမိန့်ကိုပြန်သွားဖို့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါပေါင်းစပ်ရှည်လျား3စာမျက်နှာများထက်ပိုခဲ့လျှင်, တစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်ထည့်သွင်းရန်တွန့်ဆုတ်ကြဘူး။ ဇယားများနှင့်ဂရပ်များစာသားကိုအတူလိုက်ပါနဲ့သရုပျဖျောဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ခွဲစိတျအပိုငျးမြား၏ခေါင်းစဉ်ပြောနေတာရပါမည်။ ခေါင်းစဉ်လည်းဆင်းရဲသားကို (ဥပမာသမိုင်း, အခြေအနေတွင်,) ဆင်ကိုရှောင်ပါ။ အဆိုပါအာမခံလူတယောက်အာဏာရှိသည်နှင့်အပိုဒ်များ၏ content ပေါ်သတင်းအချက်အလက်ပေးရမညျ။
အပိုဒ်နှင့်စပ်လျဉ်းတော်တော်လေးစာကြောင်းများတည်ဆောက်လိုသောလည်း Lyrics ဖြစ်ရန်မလိုအပ်လည်းမရှိ, ကတိုတောင်းစာကြောင်းများအကြောင်းကိုပိုကောင်းထောက်ခံသူရှင်းလင်းပြတ်သားသည်။ အဆိုပါအပြင်အဆင်သည်အမှတ်သရုပျဖျောဖို့, အသေးစိတ်အစီအစဉ်ကိုဖော်ပြကော်လံထဲသို့ဖန်တီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်အဓိကကိန်းဂဏန်းများ, ဂရပ်များ, ရုပ်ပုံများစာမျက်နှာကိုဝေဖို့အသုံးဝင်စေနိုင်ပါတယ်။
ရေးသားနေစဉ်ယေဘူယျအားဖြင့်အသုံးမ ၀ င်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမဖော်ပြရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ အကျဉ်းချုပ်အားယေဘူယျအားဖြင့်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ပြနေစဉ်ဤအရေးမကြီးသောအချက်အလက်များကိုဖယ်ရှားသည် ထို့အပြင်နှုတ်ဖြင့်ပြောခြင်း၊ နှုတ်ဖြင့်ဖော်ပြခြင်း၊ ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ခြင်း၊ မတည့်ခြင်းစသည်တို့ကိုဖယ်ရှားရန်ဂရုပြုရမည်။
အထူးသဖြင့်တိကျသောအဓိပ္ပာယ်မရှိပါကနှုတ်ဖြင့် tics အောက်တွင်ကျသောစကားလုံးအချို့သည်အရေးအသားမရှိပါ။ စာပိုဒ်၏အစတွင်ရှိသော“ မည်သို့ပြောရမည်” ဟူသောစကားလုံးသည်ဝါကျ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုမထိခိုက်စေဘဲဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအနေဖြင့်အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ရန်နှင့်အထင်ရှားဆုံးသာထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။
စပီကာများကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်အသုံးအနှုန်းတွေမျိုးပွားလည်းအကြံပြုသည်။ ဤအအသုံးအနှုန်းတွေတစ်စပီကာကအသုံးပြုမယ့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဘာသာစကားပိုင်လျှင်, သူတို့သည်နားလည်မှုအတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမူကြမ်းရေးဆွဲကြိုတင်မဲအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းကသူ၏အရေးအသားမွမ်းမံရန်နှင့်ဖတ်ရှုဖို့အရေးကြီးပါသည်။
တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကျဉ်းချုပ်ရေးသားဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ဇူလိုင်လ 25th, 2021Tranquillus
အောက်ပါစာသားသို့မဟုတ်စာမျက်နှာဘာသာပြန်ဆိုဖို့အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်း tools များ